Ijellyfish yaselwandle: iimpawu, ityhefu ebulalayo kunye nomjikelo wobomi | Ngeentlanzi
Las Ijellyfish yolwandle Zezinye zezona zilwanyana zakudala ezikhoyo. Bebekho eMhlabeni ngaphezulu kwe-600 yezigidi zeminyaka kwaye bahlelwa yisayensi njengezona zilwanyana zintsokothileyo ezikhoyo. Kunzima ukucinga ukuba ezi zilwanyana zinokutya ntoni kuqala, kuba uninzi lomzimba wazo lwenziwe ngamanzi.
Kule nqaku siza kwazi nzulu ngejeli yasemanzini kunye nedatha eninzi eya kuthi ngokuqinisekileyo ikuchukumise ngokwaneleyo ukuba uyazi. Ngaba uyafuna ukufumana ilizwe elinomdla kwezi zilwanyana zakudala? Funda ukuze ufunde ngakumbi.
1 Yintoni i-jellyfish yolwandle
2 Inkcazo ngokubanzi
3 Ityhefu uphawu
4 Ubomi kunye nomjikelo wokuzala
Yintoni i-jellyfish yolwandle
Into yokuqala ekufuneka siyichazile yile nto iyi-jellyfish yolwandle. Yinto engenamqolo eyaziwa ngokuba yi-aguaviva, kuba ubukhulu becala amanzi ayabhalwa. Ingathi amanzi athabatha ubomi ukuze enze ezi zinto zikhethekileyo. Azinalo naluphi na uhlobo lwe-exoskeleton ukuzikhusela kwizilwanyana, njengokuba kunjalo nakwezinye izilwanyana zaselwandle, kodwa sebenzisa i-venom yabo njengokukhusela nokuhlasela.
Indawo yokuhlala yeyolwandiso lweelwandle kunye nolwandle, kuba bekwazile ukuziqhelanisa, nakuzo zonke izinto eziguqukayo, kuzo zonke iintlobo zobume kunye neemeko zaselwandle. Esinye sezizathu sokuba ngamanye amaxesha sifumane i-jellyfish kufutshane nonxweme kungenxa yokuba kufuneka basondele kancinci ukuze baqale umjikelo wabo wokuzala.
Uninzi lwezi zinto eziphilayo zihlala kwindawo yePelagic (Jonga ipelagic kunye nezinto eziphilayo zaselwandle). Eli nqanaba lelona libanzi kulwandle lonke kwaye lelona lingaphezulu okanye ngaphantsi kweemitha ezingama-200 ubunzulu.
Ijellyfish ine-morphology exhomekeke ngokupheleleyo kwindidi esijongana nayo. Kunokubakho iintlobo ezahlukeneyo ezinokuziphatha okungafaniyo phantsi kwamanzi. Inqaku eliqhelekileyo elinayo yonke i-jellyfish yile Ubume bayo bentsimbi kunye nokuthambeka okungathandabuzekiyo kwegelatinous. Uninzi lwezi ntlobo luyatshintsha ngombala ukuze ubone ngaphakathi kwesilwanyana ngaphandle kokuvula.
Isifundo se-jellyfish yinto eyothusayo kuba, ngaphandle kwesiqhelo, xa ingaphakathi layo lihlalutyiweyo kunokuqwalaselwa ukuba ayinamalungu, kuthi, abalulekileyo. Njengokuba, ezi zilwanyana azinantliziyo, ingqondo okanye imiphunga. Nangona indaleko yejellyfish ingakhange ihambe kakhulu, ukukhula kwayo kunye nokuntsokotha kuyivumele ukuba ihlale iphila kwaye isasazeke amawaka eminyaka.
Nangona ingenamalungu angenakubekwa ndawo kuthi, yinto eyomeleleyo nenamandla into yokoyika abanye abaninzi. Xa ezinye izilwanyana zaselwandle zigweba i-jellyfish ngokwembonakalo yazo, zinokubalekela kwingozi enkulu phambi kwazo. Kwaye kukuba ezi zilwanyana zinetyhefu ebulalayo kwiintlobo ezininzi. Elona lungu linokujongwa xa sihlalutya ingaphakathi lejellyfish sisisu. Yile nto uyifunayo ukuze ukwazi ukukwenza konke ukutya okutyayo ukukuguqula kube zizakhamzimba.
Ubuhlungu bejellyfish bunokubulala kakhulu Uyakwazi ukubulala umntu kwimizuzu nje embalwa. Ngokuxhomekeke kuhlobo esisebenza ngalo kunye nendlela esiya ngayo kwezonyango, ubomi bunokugcinwa okanye bungasindiswa.
Olunye lweempawu eziphambili zokuba ne-jellyfish yolwandle yityhefu yabo. Yinto enamandla kakhulu enetyhefu eneeseli ezihlabayo ezibizwa ngokuba ziicnidocytes. Ezi iiseli zezona zenza zonke iintlobo zezinto zeCnidarians ukuba zibe luphawu. Ityhefu uyisebenzisela ukubamba ixhoba lakhe kwaye ngesisu esinokubonwa ngeliso lenyama, siyabangenisa kwaye siguqula sibe zizondlo.
Esona senzo siphambili sale tyhefu ibulalayo kukhubaza ixhoba ukuze likwazi ukulitya. Ukuphazamisa ngokupheleleyo umntu, uxinzelelo lwetyhefu olungena emzimbeni wethu kufuneka luphakame kakhulu kunolwesilwanyana saselwandle. Ubungakanani bethu kunye nomphezulu womhlaba mkhulu kunentlanzi, ke kuyakufuneka ukuba uwuphindaphinde kathathu okanye ngaphezulu umlinganiselo wetyhefu oyisebenzisayo ukushiya umntu ekhubazeke ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, kukho iingozi ezininzi esijamelana nazo xa ulwandle lwejellyfish lubhukuda kufutshane nonxweme ngexesha labo lokuzala. Qho ngonyaka abantu babulawa zizibunu zejellyfish kwaye amawaka abanye ayenzakala kwaye anemingxunya. Kukho jellyfish ezimbalwa ezinokusibulala ngokupheleleyo, kodwa kufuneka kuthintelwe yonke imeko enokwenzeka.
Ubomi kunye nomjikelo wokuzala
Uninzi lweentlobo zejellyfish zinomjikelo wobomi ongaqhelekanga. Basebenzisa indlela yesondo eyahlukileyo kancinane kunaleyo siqhele ukuyibona. Ukudibanisa ii-gametes ezimbini (eyindoda nebhinqa) yindlela entsha yobomi ebizwa ngokuba yipolyp eyenziweyo. Le polyp ihlala incanyathiselwe kwi-substrate yomgangatho wolwandle kwaye ikhula de iphele umjikelo wayo kwaye kubangela ezinye iinkuku ezininzi ezanyisayo.
Oko kukuthi, ukusuka kumnqamlezo omnye phakathi kwe-jellyfish, banokuphinda bavelise kwaye banike amakhulu kubo. Esi sesinye sezizathu zokuba, ngaphandle koburhabaxa bayo xa ihlasela ixhoba layo ngetyhefu ebulalayo, iyakwazi ukusinda kwaye iqhubeke nokuba yenye yeentlobo ezikhoyo kwihlabathi liphela ngaphezulu kwama-600 namhlanje.Izigidi zeminyaka.
Kuyamangalisa ukwazi ukuba ezi zilwanyana Zisetyenziswa kwishishini lokuthambisa kunye nokubonisa ubuhle kwaye sinokuyifumana kwiimveliso ezininzi ezisetyenziswa mihla le.
Njengesiqhelo kuyo yonke le mixholo yezilwanyana imangalisayo, umntu onetekhnoloji yakhe uyakwazi "ukulawula" kwaye asebenzise umzimba wakhe ukuze azuze. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke kakhulu xa kukho iflegi eblue elunxwemeni. Oku kuthetha ukuba uxinizelelo lwejellyfish kufutshane nonxweme luphezulu kwaye kufuneka ulumke ungagezi. Ngale ndlela uninzi lwamashwa luya kuthintelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Ijellyfish yolwandle